समानान्तर Samanantar: March 2010
Posted by Govinda at 3/24/2010 10:28:00 AM 1 comment:
Posted by Govinda at 3/22/2010 06:15:00 AM No comments:
नेपाली सेना बेलाबखत विवादमा पर्छ। विवाद भएपछि सञ्चार माध्यम र समाजमा पनि टिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो। सेनालाई आलोचना मन पर्दैन। अनि गुनासो र यदाकदा चर्को प्रतिवाद पनि हुन्छ। सायद, सैनिकमा प्रतिरक्षात्मक मानसिकता निर्माण गर्ने क्रममा यस्तो प्रवृत्तिको विकासै पो गरिएको हुन्छ कि? यसको उत्तर कुनै सैन्य मनोवेत्ताले दिनसक्लान्। तर, अधिकांश आलोचना सेनाको रुखो र अपारदर्शी कार्यशैली र व्यवहारले निम्त्याएको देखिएको छ। हालैका केही उदाहरण हेरौँ।
काठमाडौंको भद्रकालीबाट माइतीघर जानेआउने बाटो संकटकालको मौका छोपेर सेनाले बन्द गरेको थियो। उति बेला केही डर र केही सेनाप्रतिको समर्थनले गर्दा पनि यस विषयमा खासै कसैले मुख खोलेन। सेनाको डर दोस्रो जनआन्दोलनसम्म कायमै रह्यो। तर, स्थिति सामान्य भएपछि पनि त्यो बाटो खोल्न सेना मानेन। जनसाधारण र सञ्चार माध्यमले यस विषयलाई उठाए। पछिल्लो पटक नागरिक दैनिकले यस सडकका बारेमा सोध्दा सेनाका प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले रुखोे र असंगत उत्तर दिए। उनको उत्तरले त्यो बाटो रोक्नुको औचित्य पटक्कै पुष्टि गर्दैन। बरु, सेनाप्रति कटुता उत्पन्न गर्छ। क्षेत्रीको भनाइ थियो - 'जताततै हाम्रो क्याम्प रहेको स्थानमा त्यो बाटो परेकाले सार्वजनिक भए पनि, जे भए पनि हामी खोल्दैनौ।' उनको भनाइमा शक्तिको दम्भ ध्वनित हुन्छ। सार्वजनिक सडक खोल्ने वा बन्द गर्नेे निर्णय सेनाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। सडक विभाग वा महानगरपालिकामध्ये कसैको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा सेनाले त्यस्तो हठ र दम्भ प्रदर्शन गर्नु उचित होइन। खोल्न नमिल्ने तर्क दिन हुन्थ्यो वा सेनाको सडक बन्द होस् भन्ने चाहना च भनेर आफ्नो अडान राखेको भए पनि हुन्थ्यो। दम्भ नदेखाई स्पष्ट उत्तर दिएको भए सेनाको थप आलोचना हुने थिएन। यही प्रसंगमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएका ठाउँका पुराना बाटा अब खुल्छन् भन्ने उनको प्रतिप्रश्न त झन् ओँठे जबाफमात्रै भयो। विमानस्थलमा बाटो भए जहाज उडाउन-ओराल्नै मिल्दैन। भद्रकालीको बाटो जनता हिँड्दा सेनाको के कति खती हुन्छ? कुनै कामै रोकिन्छ भने त्यही जानकारी दिए हुन्थ्यो। सैनिक दम्भ ध्वनित हुने यस उत्तरमा नेपाली सेनाले निया कानुन मान्दैन र अरू कसैलाई टेर्दैन भन्ने देखिएन र?
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गत बुधबार तीन महिला मारिए। उनीहरूको मृत्यु सेनाले चलाएको गोली लागेर भयो। यतिसम्म सेनाले पनि स्वीकार गरेको छ। तर, सेनाले दिएको अरू विवरण पटक्कै पत्यारलाग्दो छैन। सैनिक जनसम्पर्क दिर्नेशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चोरसिकारीहरूलाई चेतावनी दिँदा उनीहरूले फायर गरेकाले आत्मरक्षाका लागि प्रतिकारात्मक कारबाही गर्दा तीन जनाको मृत्यु भएको भनिएको छ। मर्नेहरू सबै महिला छन्। स्थानीय तुलाराज भारतीले भनेजस्तै तिनीहरू बन्दुक बोकेर चोरीसिकारका लागि बन पसेका होलान् भनेर पत्याउने आधार छैन। गाउँलेहरू काउलाको बोक्रा लिन बन पसेका थिए रे। उनीहरूलाई पत्रे्कर सेनाले हत्या गरेको भन्ने आरोप पनि सही नहुन सक्छ। बलात्कारको आरोप पनि सही नहुन सक्छ। शव परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे सबै यथार्थ थाहा हुनेछ। काउलाको बोक्रा लिनै पनि बिनाअनुमति निकुञ्जभित्र पस्नु गैरकानुनी हुन्छ। सेनाको गस्तीले भेटेपछि उनीहरू भाग्न खोजेकाा र भाग्न खोज्दा प्रहार गरिएको गोली लागेर उनीहरू मरेको हुनसक्छ। गस्तीमा सैनिकलाई जोगाउन बुनिएको जालले घटनालाई बढी रहस्यमय बनाइ दियो। त्यसको परिणामा सेनाप्रतिको स्नेह र सम्मान घट्नेबाहेक अरू हुँदैन।
नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव बी लिन पास्कोसँगको भेटमा प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले माओवादी लडाकुलाई समूहगतरूपमा सेनामा लिन सकिन्दैन भनेछन्। लडाकुहरू राजनीतिकरूपमा दीक्षित भएकाले तिनको सामूहिक प्रवेशले सेनाको अनुशासन, चरित्र र सांगठनिक एकतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रधान सेनापति गुरुङका तर्कसँग माओवादीबाहेक अरू असहमत पनि नहोलान्। तर त्यो विचार सरकारलाई सुझावमात्र हुन सक्छ। समायोजनको विधि राजनीतिक निर्णयको विषय हो। कसैलाई मन परे, पनि नपरे पनि त्यस्तो निर्णय मान्नैपर्छ। राजनीतिक विषयमा सेनाले बोल्न थाले विवाद बढ्छ।
नेपाली सेना विवादबाट जोगिन सकेमात्र राष्ट्रिय गौरव बन्न सक्छ। यसैले सेनाले अनावश्यक दम्भ देखाउने, मनोबल कायम राख्ने नाउँमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गरेर विवादमा फस्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। अनिमात्र सबै क्षेत्रमा सम्मान हुनेछ। भनिन्छ, ‘धर्मो रक्षति रक्षितः'। अर्थात्, धर्मले रक्षा गर्र्नेको रक्षा गर्छ। नेपाली सेनाले राजनीतिमा नमुछिने धर्म पालन गर्न सकेमात्र ऊ पनि रक्षित हुनेछ। भारत र पाकिस्तानकै सेनाको उदाहरण हेरौँ न। पाकिस्तानको सेना राजनीतिमा डुबेको छ। यसले विवादास्पद छ। भारतको सेना राजनीतिमा छैन। त्यसैले विवादबाट पनि जोगिएको छ।
Posted by Govinda at 3/14/2010 01:24:00 PM No comments:
बर्दीमा लागेको दागमा मुछिने कि मेटाउने रोजाइ प्रधानमन्त्री नेपालकै हो।
सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै जनताले चिन्ने र गुहार्ने पहिलो संस्था प्रहरी हो। यसैले सुरक्षा अवस्था बिग्रँदा प्रहरीलाई दोष लाग्नु स्वाभाविकै हुन्छ। त्यसमाथि जमिम शाह हत्याका मुख्य अभियुक्त मानिएका दीपक शाही (बब्बु)सँग प्रहरीका केही बहालवाला र पूर्वअधिकृतको नाम जोडिएपछि जनमानसमा अविश्वास झन् बढेको हो।
जमिमको हत्या दिउँसै र जताततै प्रहरी तैनाथ भएको क्षेत्रमा भयो। अरुण सिंघानियाको हत्या पनि प्रहरी चौकीको नजिकै भएको थियो। नजिकै तैनाथ प्रहरी जघन्य अपराधको तमासा हेरेर बसे। ठूला अपराधीले प्रहरीको डरै मान्न छाडेका छन्। सामान्य जनता अपराधी र प्रहरीको मिलोमतो हुन्छ भन्ने ठान्छन्। सायद, यही कारणले भिड आफैँ ‘इन्साफ' गर्न तम्सने गरेको हो। खासगरी मोटर दुर्घटनापछि घटनास्थलमा उपस्थित सामान्य जनता पनि बढी आक्रोशित भएर सबारी साधन तोडफोड तथा चालकलाई कुटपिट गर्ने प्रवृत्तिको मूल कारण प्रहरीप्रतिको अविश्वास हुनुपर्छ।
माओवादीले सुरु गरेको सहस्त्र द्वन्द्वले हिंसालाई नेपालीको घरघरमा पुर्‍याएको हो। शान्ति सम्झौतापछि माओवादी वा राज्य कतैैबाट पनि नेपाली जनताले भोगेको हिंसाको घाउमा मलम लगाउने प्रयास भएन। उल्टै हिंसाका जघन्य घटना र संलग्न अपराधीहरूको महिमा गायन भयो। राजनीतिक नायकले प्रत्यक्ष-परोक्ष हिंसाको स्तुति गरे। हिंसाको निन्दा गर्नेले पनि घृणा बढाउने शैली अपनाए। यसले पनि समाजलाई बढी उग्र र संवेदनहीन बनायो। समाजको यो प्रवृत्ति नेपाल प्रहरीमा पनि छ। धेरैजसो तमासे बन्ने र हस्तक्षेप गर्नेबित्तिकै बढी बल प्रयोग गर्ने प्रहरीको चरित्र बन्न पुग्यो। दुवै अवस्थामा प्रहरीप्रति जनविश्वास घट्ने र आक्रोश बढ्ने हुन्छ। सम्भवतः अहिले जनसाधारणमा देखिएको प्रहरीप्रतिको अविश्वास र आक्रोशको कारक यो पनि हो।
बहालवाला वा पूर्वप्रहरी अधिकारी अपराधमा मुछिएको देखिएको अहिलेमात्रै होइन। पञ्चायतकालमा लागू औषध तस्करीजस्ता अपराधमा प्रहरीका उच्च अधिकारीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो। हुनत, त्यस प्रकारका कारबाही दरबारको शक्ति संघर्षको ‘बाइ प्रोडक्ट' हुने गर्थे। भरत गुरुङ र डीबी लामालाई तस्करीमा संलग्नताको कारणले भन्दा धीरेन्द्रको पँखेटा कत्रन सिकार बनाइएको थियो। उनीहरू दरबारको बलियो समूहका कृपापात्र भएका भए कारबाहीमा पर्ने थिएनन्। त्यसपछि पनि तस्करीमा प्रहरीलाई प्रयोग गरियो। यस्ता घटनाले प्रहरीको मनोबल, नैतिक वैधता र साख घटाए।
यस पटक त नेपाल प्रहरीका अधिकृत हत्याराको मतियारका रूपमा पोलिएका छन्। ‘सत्य सेवा सुरक्षा' मूल मन्त्र भएको संस्थाका बहालवाला अधिकारी हत्याराको मतियारका रूपमा देखापर्नु अत्यन्त लज्जा र ग्लानिको विषय हो। यसले प्रहरीको बर्दीमा कालोे दाग लागेको छ। यति हुँदा पनि कसैले पदीय हैसियतमा नैतिक जिम्मेवारी सकारेन। प्रहरीको छवि धमिलो बनाउन यो ‘नकच्चरोपन' पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
केही अधिकृत वा जवानको आपराधिक चरित्र र प्रवृत्ति देखिएकै भरमा सिंगै प्रहरी संस्थालाई बदनाम गर्नु अन्याय हुन्छ। तर, उच्च नेतृत्व अपराधी जोगाउन लागेको देखियो भने सिंगै निकाय बदनाम हुन्छ। अहिले सिंगै प्रहरी संस्थामाथि औँलो उठ्न थालेको छ। चिन्ताको विषय यो हो।
सेना नभएका मुलुक छन् तर प्रहरीबिना कतै पनि शासन चलेको देखिएको छैन। यसैले नेपाल प्रहरी र नेपाली जनता दुवैका सामु यस संस्थाको सुधारबाहेक अर्को विकल्प छैन। सुधारको आरम्भ तल्लो तहको मनोबल बढाएर र उपल्लो तहमा मानसिकता परिवर्तन गरेर गर्नुपर्ने देखिएको छ। पैसा र पहुँच भएका अधिकृत र राजनीतिक नेताका साँठगाँठका कारण प्रहरीको बर्दीमा लागेको दाग मेटाउन सबैभन्दा पहिले मिलेमतोमा बनेको ‘गिरोह' भत्काउनुपर्छ। पैसा नखुवाइ प्रहरीमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा हुनै सत्तै्कन भन्ने मान्यता मेटाउनुपर्छ। घुस खुवाउनेले दोब्बर उठाउन खोज्ने नै भए। पैसा कमाउन गैरकानुनी उपाय सुरु गरेपछि त्यसको सीमा हुँदैन। उदाहरण अहिलेको नेपाल प्रहरी हो। संगठित सेवामा एकै पटक ठूलो उपथपुथल गर्न सकिँदैन। यसैले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन सुधारका लागि सकारात्मक विन्दु हुनसक्छ। अर्थात्, गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलको राजिनामा प्रहरीको बर्दीमा लागेको दाग पखाल्ने पहिलो उपाय साबित हुनसक्छ। रावलले आफ्नो मन्त्रालयको यावत् विफलताको नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ र त्यसपछि प्रहरीको नेतृत्वलाई पनि उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।
अहिले सुरक्षा विफलताका कारण सरकारको विरोध बढेको छ। यो विरोधी दलको राजनीतिक प्रचारवाजी होइन। सामान्य जनताको आवाज हो। अर्थात्, भित्तामा लेखिएको बेलाको बोली हो। यसलाई बुझेर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गरे भने उनको साख बढ्नेछ। अन्यथा, प्रधानमन्त्री नेपाल गृहमन्त्री रावलसँगै बिदा हुनुपर्ने हुनसक्छ। बर्दीमा लागेको दागमा मुछिने कि मेटाउने रोजाइ प्रधानमन्त्री नेपालकै हो।
Posted by Govinda at 3/08/2010 09:55:00 PM No comments:
धनकुटाको हिलेस्थित नम्बर २ बाहिनीमा तालिम लिँदै गरेका सिपाही रेशमबहादुर भण्डारीको माघ २७, २०६६ का दिन मृत्यु भयो। दैलेखको डाँडापराजुल निवासी भण्डारी नेपाली सेनाको कालीध्वज गणका सिपाही हुन्। सेनाले भण्डारीको मृत्युको घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड' गठन गरेको र तालिममा संलग्न अधिकृतलगायत ६ सैनिकलाई हिरासतमा लिई कारबाही चलाएको औपचारिक जानकारी दिएको छ। भण्डारीको शव परीक्षण धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन संस्थानमा गरिएको थियो। अहिलेसम्म भण्डारीको मृत्युको कारण सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, उनलाई दिइएको शारीरिक सजायका कारण मृत्यु भएको दाबी प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै उनका आफन्तले गरेका छन्। सेनाको विज्ञप्तिमा घटनामा संलग्न रहेका व्यक्ति दोषी ठहरिएमा सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम कडा कारबाही गरिने उल्लेख भएकाले पनि भण्डारीको मृत्यु भवितव्य थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ।
काठमाडौंको प्रणवानन्द आश्रममा ६ वर्षका बालक रूपेश गिरीको मृत्यु भयो। अहिलेसम्म थाहा भएअनुसार आश्रमकै अर्का बालकको कुटपिटबाट उनको मृत्यु भएको हो। तर, उनको मृत्युलाई दबाउन खोजियो। आश्रमका सञ्चालक सुदानन्दको निर्देशनमा शरण कोइरालाले मृत बालकलाई अस्पताल पुर्‍याएका थिए। ओम अस्पतालका चिकित्सकले बालकको शरीरमा नीलडाम देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका कारणमात्र हत्याको घटना बाहिर आयो। बालक गिरीलाई उनकै आश्रमका अर्का विद्यार्थीले कुटेका रहेछन्। आश्रमभित्र ज्यानै लिने गरी कुटपिट गर्दा पनि सँगै बस्ने कसैले बचाउन नखोजेकाले रूपेशको ज्यान गयो। यस घटनाबाट आवासीय विद्यालय वा यस्तै आश्रम वा विभिन्न नामका गृहहरूमा राखिएका बालबालिका कति असुरक्षित छन् र तिनका सञ्चालक कति संवेदनहीन छन् भन्ने देखिन्छ। सबै आवासीय विद्यालय वा बाल गृहहरू यस्तै नहोलान् तर सुदानन्द बाल गृह सञ्चालकहरूको प्रतिनिधि पात्र र प्रवृत्ति हो।
पाँचथरमा प्रहरीले हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई गाउँलेले कुटेर मारेका छन्। चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका प्राङबुङ - ४बम ज्ञाङ्मी मगरका बाबुछोरा दलबहादुर र विक्रमलाई प्रहरीकै सामु गाउँलेले कुटपिट गरेपछि मृत्यु भए पनि कसैमाथि मुद्दा चलाइएको छैन। किटानी जाहेरी नपरेकाले मुद्दा नचलाएको प्रहरीको बताएको रहेछ। प्रहरीको संख्या थोरै भएकाले गाउँलेको कुटाइबाट जोगाउन नसकेको स्पष्टीकरण पनि प्रहरीले दिएको छ। सरकारवादी हुने मुद्दामा आँखै अगाडि भएको वारदातका दोषीलाई पक्रनुको साटो काइते तर्क दिएर उम्कन खोज्नुले घटनामा प्रहरीको संलग्नता वा समर्थन कुनै न कुनै रूपमा रहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। कमाइ नहुने घटनालाई अनावश्यक झ्याउलो ठान्ने प्रहरीको मानसिकता यस घटनाबाट पुनः प्रकट भएको छ।
सञ्चार माध्यममा आएका समाचार हेर्दा यी तीनैवटा घटना सकेसम्म सामसुम गर्न खोजिएको देखिन्छ। सैनिक र प्रहरी मुछिएको घटनामा त यसै पनि खासै कारबाही हुँदैन। ‘तालिमका क्रममा सिपाहीले अनुशासन भंग गरी रक्सी खाएको र सम्झाइबुझाइ गर्न खोज्दा भवितव्य परी निजको ज्यान गएको देखिएकाले संलग्न भएका सैनिकलाई दोषी ठहर्‍याउन नमिल्ने' भन्ने बोलीको प्रतिवेदन लिएर भण्डारीलाई ज्यानै जाने गरी कुटपिट गर्नेहरूलाई चेतावनीस्वरूप ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय गरेर मिसिल बन्द हुनसक्छ। सेनाले यस्ता घटना सधैँजसो सामसुम पार्दै आएको दृष्टान्त जो छ। बालक रूपेश गिरीको हत्यालाई पनि सामसुम पारियो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। बाबु विदेशमा रहेका र आमा पनि सामान्य व्यक्ति भएकाले पैसाको बल वा माथिको आदेश भयो भने प्रहरी, त्यसपछि सरकारी वकिल र अन्त्यमा प्रमाण कमजोर भएको कारण देखाएर अदालतबाटै हत्यारा उम्कने सक्छन्। नभए कुटपिटमा प्रत्यक्ष संलग्न बालकलाई जिम्मेवार बनाएर अरूलाई उम्काउने प्रपञ्च हुनसक्छ। ताप्लेजुङका बाबुछोरामाथि त यसै पनि चोरीको आरोप लागेको छ। प्रहरीकै कुटाइले मरेको भनिएको छैन। न गाउँलेको सहानुभूति उनीहरूले पाउँछन्। तिनको हत्या सामसुम हुनु के अनौठो भयो र?
के सेनाको अनुशासन, आश्रमको इज्जत वा प्रहरीको मनोबल मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो हो? सामान्य मान्छेको जिन्दगीको महत्व हुँदैन? कानुनअनुसार त सबै बराबरै हुनुपर्ने हो। सेनाको कुनै अधिकृत त्यसरी मारिएको भए यस्तै सामसुम पार्ने काम हुन्थ्यो त? अवश्य पनि हुने थिएन। रूपेश वा ती बाबुछोरा कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएका भए प्रहरीका सामु कुटपिट गरेर मार्दा मानव अधिकारवादी भन्नेहरू यसरी तमासा हेरेरै बस्ने थिए त?
के पद, पैसा र पहुँच नहुनेको जिन्दगी सस्तो ठान्ने मानसिकता कहिले बदलिएला? जिन्दगी यसरी नै सस्तो भइरहने हो भने कसरी भए त यी नागरिक सार्वभौम?
Posted by Govinda at 3/01/2010 06:49:00 AM No comments: